ESI GBANWEE AFỌ NA YOUTUBE - YOUTUBE - 2019
Ịgbanwe afọ na YouTube
Usoro nke ibipụta akwụkwọ na ngwa nbipute, na nlele mbụ, bụ ihe dị mfe nke na-adịghị achọ ka ndị ọzọ gbakwunyere. Otú ọ dị, e nwere ọtụtụ mmemme ndị na-eme ka obibi akwụkwọ dị mma ma n'otu oge ahụ na-enye atụmatụ ndị ọzọ. Otu n'ime ndị a bụ pdfFactory Pro, nke a ga-atụle n'isiokwu a.
Ọrụ bụ isi nke pdfFactory Pro bụ ntụgharị nke akwụkwọ ọ bụla na PDF. Na ya, ị nwere ike ịmegharị faịlụ ndị e kere na Okwu, Excel na ndị nchịkọta ndị ọzọ, bụ nke nwere ọrụ obibi akwụkwọ. Nke bụ eziokwu bụ na pdf Factor Pro arụnyere dịka onye ọkwọ ụgbọala nbipute ma tinye ya ozugbo na ngwanrọ dakọtara na ngalaba "Bipute".
pdfFactory Pro na-enye gị ohere idezi faịlụ ederede a gbanwere edegharị site na ịgbakwunye ọtụtụ akara mmiri, ederede, mkpado, ụdị, na njikọ ya. Nke a ga-enyere aka inweta ọdịdị chọrọ nke akwụkwọ ahụ, nke ga-emesị bipụta ya.
Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ kpebiri ichedo ederede ya, mgbe ahụ, site n'enyemaka nke PDF Factor Pro ọ ga-enwe ike idebe paswọọdụ maka ya, yana igbochi mgbalị ọ bụla iji detuo, gbanwee ma bipụta ọdịnaya. N'ihi nke a, ọ ga-ekwe omume ngwa ngwa wepụ ohere nke ndị si mba ọzọ na-ekiri ma na-edezi faịlụ ahụ e kere eke.
Ihe odide akwụkwọ
Mgbe ị na-edezi faịlụ ahụ na pdf Factor Pro, onye ọrụ nwere ike bipụta ya na ụzọ mbụ, site na ịhọrọ nchịkọta chọrọ na ịtọ ntọala ndị achọrọ.
Ọ dịghị achọ ka onye nbipute rụọ ọrụ;
Ohere nke iche iche nchebe.
Onyinye nke onye mmepụta na-enye.
pdfFactory Pro bụ usoro magburu onwe ya nke na-enye onye ọrụ ihe ndị ọzọ maka ibipụta akwụkwọ na nbipute. Tụkwasị na nke ahụ, ọ nwere ọtụtụ ọrụ bara uru, gụnyere ịgbanwe faịlụ na PDF ma wụnye ọkwa ọzọ nke nchebe na ya.
Download mbipụta nke pdfFactory Pro
PDF Complete Onye edemede CutePDF WinDjView Nlekere
pdfFactory Pro na-enye onye ọrụ ọrụ ndị ọzọ iji bipụta akwụkwọ, mgbe ọ na-echebe ya site na mgbochi ndị ọzọ. Na-enyekwa gị ohere igbanwe faịlụ gaa na PDF.
Onye Mmepụta: FinePrint Software
Ọnụ: $ 100
https://termotools.com ig.termotools.com © YouTube 2019